Fayruska Coruna oo Dhaawac Weyn Gaarsiiyay Dhaqaalaha Shiinaha. – Shabakadda Amiirnuur
January 28, 2020 4:48 am by admin Views: 149
Coronavirus-ka cusub, ee ku faafay Shiinaha, wuxuu saamayn daran ku yeeshay waaxyaha qaarkood sida dalxiiska, ganacsiga iyo gaadiidka.
In kasta oo ay goor hore tahay in la go’aamiyo saameynta dhaqaale ee cudurka faafa, haddana waaxyaha qaarkood waxay sheegeen inuu si adag u saameeyay taasna ay hoos usii dhigeyso dhaqaalaha dalka.
Dowladda wadankaasi waxay ku waramaysaa iney kordhisay tallaabooyinka ay uga hor tageyso xanuunka, Xataa meel ka baxsan aagga karantiilnimada oo uu ku saameeyay ku dhawaad 60 milyan oo qof oo ku nool Wuhan, ayaa awaamiir hor leh la hor dhigay si looga fogaado isu imaatinka dad weynaha.
Qoraaga dalkaasi ku dhaqan ayaa tilmaamay in Fayruska uu si daran u saameeyay dalxiiska Shiinaha, maadaama malaayiin Shiinees ah ay baajiyeen safarradooda inta lagu gudajiray sanadka cusub.
Tan iyo Isniinta, hay’adaha socdaalka ayaa laga mamnuucay inay iibiyaan tigidhada safarka abaabulan iyo hudheellada, tanina waxay dhabar jab weyn ku tahay wershadaha maxalliga ah, iyo in badan oo ka mid ah meelaha ay door bidaan dalxiisayaasha Shiinaha ee loo diiday inay booqdaan Aasiya, sida Thailand, Vietnam, Japan iyo Philippines, iyo sidoo kale dalalka Yurubta sida:-Faransiiska.
Haddii uu Fayruskan sii baaho wuxuu dhulka la gali karaa dhaqaalaha Shiinaha sida ay khubarradu sheegayaan, sida muuqatana cudurku waa mid si fudud kusii faafaya maadaama uu ku dhoco habdhiska neef mareenka.